अमेरिकाको न्युयोर्कमा राजेश पायल राईमाथि हातपात : कलाकारहरुद्वारा भर्त्सना - टि. एल. एन पोस्ट
Home मनोरञ्जन अमेरिकाको न्युयोर्कमा राजेश पायल राईमाथि हातपात : कलाकारहरुद्वारा भर्त्सना
अमेरिकाको न्युयोर्कमा राजेश पायल राईमाथि हातपात : कलाकारहरुद्वारा भर्त्सना
अमेरिकाको न्युयोर्कमा गायक राजेश पायल राईमाथि स्टेजमा गीत गाईरहेको अवस्थामा हातपात भयो । अंग्रेजी नयाँ वर्षको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममा गीत गाइरहँदा एक व्यक्तिले उनमाथि हातपात गरेका हुन् ।
न्युयोर्कमा आयोजित कन्सर्टमा उनले गीत गाइरहेका बेला एक दर्शक स्टेजमा चढ्छन् । ती दर्शकले पछाडिबाट न्याक्दै गायक राईमाथि हातपातको प्रयास गर्छन् । यद्यपि अन्य दर्शकले ती व्यक्तिलाई त्यहाँबाट बाहिर निकालेका थिए । दर्शकले कुटपिट हुनबाट जोगाएका छन् ।
उनीमाथि हातपातको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । कतिपयले गायक राईमाथि हातपात हुनुमा व्यवस्थापकको कमजोरी रहेको औँल्याएका छन् । नयाँ वर्ष २०२२ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सांगीतिक प्रस्तुति दिन उनी न्यूयोर्कमा छन् ।
गायक राजेशपायल राईमाथि अमेरिकामा भएको अभद्र व्यवहारको अमेरिकामा रहेका कलाकारहरुले निन्दा गरेका छन् । गायक राईमाथि शुक्रबार न्युुयोर्कमा एक सांगीतिक कार्यक्रमका क्रममा पासाङ दावा शेर्पा नाम गरेका व्यक्तिले अभद्र व्यवहार गरेका थिए ।
अमेरिकामा रहेका कलाकारहरुले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जोडदार माग समेत गरेका छन् । स्टेजमा गीत गाइरहेको समयमा राजेशपायलमाथि शेर्पाले हातपात गरेका थिए । उनको घाँटी निमोठ्दै उनीमाथि स्टेजमा शेर्पाले दुर्व्यवहार गरेका थिए ।
आयोजकले घटना सामान्य भएको भन्दै ढाकछोप गर्न खोजेको विषयलाई समेत अमेरिकामा रहेका कलाकारहरुले भर्त्सना गरेका छन् ।
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका चर्चित हस्तीहरुले समेत गायक राईमाथि भएको दुर्व्यवहारको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । प्रमोद खरेल लेख्छन , ‘ अमेरिका न्यूयोर्क को एक कार्यक्रम सिलसिला मा आदरणीय राजेश पायल राइ ज्यू लाइ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा नै भएको दुर्व्यवहार अत्यन्त खेदजनक र आपत्तिजनक छ । कार्यक्रम व्यवस्थापन मा कमजोरी त देखियो नै तर हामी नेपाली समुदाय का भेला , गोष्ठी, कार्यक्रम माथी नै प्रश्न उठ्न सक्ने यस्ता घटनाले पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिदैन।
संयमित बनौं…. 🙏’
यस्तै, गायिका निशा सुनार अध्यक्ष रहेको नेपाली अमेरिकन कलाकार संघले पनि गायक राईमाथि भएको आक्रमणको भर्त्सना गरेको छ । उनीहरुले दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
Previous articleनिमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ जना जुवाको खालबाट पक्राउ
Next articleबुटवलबाट शव लिएर गुल्मी जाँदै गरेको बस दुर्घटना, ७ जनाको मृत्यु
पछिल्लो समय नेपाली कलाकारहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कला क्षेत्रमा पनि धेरैले काम गर्ने मौका पाईरहेका छन। नेपाली अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको भूमिका रहेको भनिएको दक्षिण भारतीय फिल्म...
गायक राजु लामा सगरमाथा चढ्ने
गायक राजु लामाले सगरमाथा चढ्ने घोषणा गरेका छन्। शनिबार भएको ‘द भ्वाइस किड्स’को फाइनलमा राजु लामाले आफूले सगरमाथा चढ्ने घोषणा गरेका छन्। ‘यो कुरा मेरो...
यस्तो छ अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले खेलेको दक्षिण भारतीय फिल्म’थिरीमाली’ को ट्रेलर (भिडिओ सहित)
TLN Post - January 14, 2022 0
आज्काल नेपाली कलाकारहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कला क्षेत्रमा धेरैले काम गर्ने मौका पाईरहेका छन। यहि सुचीमा नेपाली अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको भूमिका रहेको दक्षिण भारतीय फिल्म 'थिरीमाली'...
TLN Post - January 9, 2022 0
बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिसको एउटा गोप्य तस्बिर बाहिरिएको छ । केही दिन अगाडि मात्रै​ ज्याकलिन र सुकेश चन्द्रशेखरसँगको तस्बिर बाहिरिएको हो । गोप्य तस्बिर...
अहिलेसम्म प्रेममा परेकी छैन : गायिका एलिना चौहान